SaiAi 发布的文章 - 星光傣
首页 音乐 文化 游记 关于
ປື້ມຄູ່ມື ໃໝ່ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຣກປອດອັກເສບ COVID-19-ເບີງ新型冠状病毒肺炎防护手册-老挝文版
ໃນເຮືອນໃນເດືອນເມສຸດຍອດ, ອົງການສຸຂະພາບໂລກ ໄດ້ພິບານສຸງເພື່ອວັນການແພມທາງຈິດເພື່ອພະຍາຍາມທາງຈິດເຈັນ ທີ່ມັນແມ່ນ "ສະພາບແລນສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມສາທະນະສຸຂະໃນເບິ່ງຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາຂ້າຍແລ້ວແລະການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ຄື້ນສະມາດຕະພັນກັບການຄ້າຂອງເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນພ້ອມທີ່ຢູ່ ປັນຫຍັງຂ້ອຍຫຼາຍຫລັງຈາກການປັບປຸງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ຽນແປງຂອງຊຸມຊ
ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບ, ກອງປະຊຸມປະຊາຊົນ ສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງປະເທດຈີດ ແລະ ອົງການສຸຂະພາບໂລກ, ອົງການສຸຂະພາບ ທີ່ຊີວຈິດແລະຊົມແລະອົງການສຸຂະພາບ ທີ່ຊີວຈິດແລະຊຸມພະຍາດກ່ຽວກັບຫຼາຍທີ່ເປັນວິທະຍາສາດສົ່ງເສີມວິທະຍາສາດສາກົນກ່ຽວກັບສະໜູນວິທະຍາ, ທ່ານສາມາດອ່ານຕາມທີ່ຕ້ອງການທ່ານ.
နယူး Coronavirus အဆုတ်ရောင်（COVID-19）ကာကွယ်ရေးလက်စွဲ - ဗမာ新型冠状病毒肺炎防护手册-缅甸文版
ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်ညနေခင်းတွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်၌ coronavirus အဆုတ်ရောင်အသစ်ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လက်ရှိကပ်ရောဂါအပြောင်းအလဲများ၊ အားလပ်ရက်အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်မြို့တော်သို့ချက်ချင်းပြန်လာခြင်းတို့ကြောင့်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပြည်သူလူထုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့သည်အလွန်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Chun Yu သည်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာတရုတ်စင်တာနှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ကိုလူတိုင်းအတွက်အောက်ပါကာကွယ်မှုလက်စွဲကိုစုစည်းရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် coronavirus အသစ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်ရေးအချက်များ၊ မိသားစုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာကာကွယ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ အိမ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အခြားပြည့်စုံသောသိပ္ပံနည်းကျရှင်းလင်းချက်များပါ ၀ င်သည့်အတွက်စာဖတ်ခြင်းကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
คู่มือการป้องกันโรคปอดบวม COVID-19 นวนิยาย - ฉบับภาษาไทย新型冠状病毒肺炎防护手册-泰文版
ในตอนเย็นของวันที่ 30 มกราคมองค์การอนามัยโลกประกาศว่าปอดบวม coronavirus ใหม่ในหวู่ฮั่นประเทศจีนถือเป็น "ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" ในมุมมองของการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงในการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันและการกลับมาที่เมืองทันทีหลังจากช่วงวันหยุดสูงสุดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการป้องกันตนเองของประชาชนได้ถึงจุดวิกฤตที่สำคัญ
ดร. ชุนหยูได้รวมคณะกรรมการสุขภาพและสุขภาพแห่งชาติศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีนและองค์การอนามัยโลกเพื่อจัดทำคู่มือการป้องกันต่อไปนี้สำหรับทุกคน การป้องกันการขนส่งการป้องกันการเดินทางการสังเกตที่บ้านและแง่มุมอื่น ๆ ของคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมคุณสามารถอ้างถึงการอ่านตามความต้องการของคุณ
© 2021 星光傣. 由 Typecho 强力驱动.滇ICP备16003563号-2